Ichukumisa umzuzu kwenye yezi zinto zibalulekileyo ezinako ukwenzeka yenza umnxeba kwisenzo ukuze i-icon eya kuthatha umsebenzisi kwinqwelo yokuthenga, amaqhosha, ibe kukuthengwa. Amaqhosha e-CSS oza kuwafumana apha ngezantsi asimahla kwaye aqukethe amaqhosha e-3D, yenethiwekhi yoluntu, ukwabelana, ukubuyela ekuqaleni okanye ukuvula kunye nabanye.
1 Iqhosha le3D
2 Iqhosha le-3D ukucinezela
3 Iqhosha elingasemva
4 Iqhosha lebhola
5 Yongeza iqhosha
6 Iqhosha leCSS Offset
7 Ukuvalwa kweqhosha
8 CSS vala iqhosha
9 Iqhosha lokukhuphela leCSS
10 Iqhosha lokukhuphela
11 Khuphela oopopayi beqhosha
12 Iqhosha lokuhambisa phezulu
13 Iqhosha lengxolo
14 Ukuhambisa isiphumo
15 Impembelelo yokuhambahamba okuhle
16 Isiphumo seGooey
17 Iqhosha Stripe
18 Iziphumo ezintathu zeqhosha le-CSS
19 Njengeqhosha le-Twitter
20 Njengeqhosha loopopayi
21 Splat njengeqhosha
22 Iqhosha lokudlala
23 Ukudlala kwakhona iqhosha leCSS
24 Misa kancinci / udlale iqhosha
25 Iqhosha elilula leRetro
26 Iqhosha Rainbow
27 Iqhosha lasekuhlaleni
28 Oopopayi abadadayo
29 Iimpawu ze-3D zentlalo
30 Amaqhosha entlalontle
31 Amaqhosha aseCubic ekuhlaleni
32 Yabelana ngamaqhosha
33 Amaqhosha okwabelana ngemidiya yoluntu kwi-SVG
34 Iqhosha lokwabelana ngeGooey
36 Iqhosha lokujonga inkwenkwezi
37 Iqhosha lamaNqaku eSVG
38 Charge iqhosha
39 Yamkela iqhosha
40 Swayipha iqhosha
41 Vula isenzo
Iqhosha le-3D elime ngaphandle ngenxa yobunzulu bayo naphi na apho siya khona ukuyibeka kunye neziphumo zokwenza umbala ezenza ukuba izinto ezibonakalayo zibonakale.
Iqhosha le-3D ukucinezela
Este Iqhosha le-3D kwi-CSS inesakhono sokuba oopopayi baya kuqala ukusebenza njengoko sisolula ixesha lokukhutshwa kwayo.
Eli qhosha leCSS liza kusithatha phezulu kwiwebhusayithi yethu xa sele sidlulile kuyo.
Omnye oopopayi abahle Inika ubomi kweli qhosha ukongeza kwi-CSS enokuba yenye yezinto ezenza ukuba iwebhusayithi yethu igqame.
Iqhosha leCSS Offset
Iyafana neyangaphambili, nangona oopopayi abohluke kancinane. Inokuba ilungelelene kuthotho lwewebhusayithi kumxholo othile.
Siyacinezela oku iqhosha kwi-CSS nakwi-HTML oopopayi bokuvala abaza kwenziwa. Ilula, kodwa inefuthe elihle lokubonwayo.
CSS vala iqhosha
Ngelo xesha masishiye isikhombisi semouse Kule qhosha lisondeleyo, sinokufumana oopopayi bomgangatho esiza kuwudibanisa kwiwebhu.
Iqhosha lokukhuphela leCSS
Ukuba sinomxholo wokukhuphela kwiwebhusayithi yethu, kubalulekile ukuba sineqhosha elifanelekileyo lokuba umsebenzisi alungele ngokukhawuleza ukubetha kwentliziyo yakho. Eli qhosha liyabonakala xa licinezelwe kwaye lilahle izinto ezininzi ezothusayo kwifoto eyenziwe kakuhle.
Eli qhosha ligxile kupopayi nyusa ibhola encinci ezakusuka kwelinye icala lebar ziye kwelinye ukusenza sibonise inyathelo elithathwa ngumsebenzisi xa ecofa ukhuphelo.
Khuphela oopopayi beqhosha
Omnye Oopopayi abade kakhulu beqhosha, kodwa leyo inokuba yile nkcukacha inikezela ngobuchule kwiwebhusayithi yakho yokukhuphela kuzo zonke iintlobo zeefayile.
Iqhosha lokuhambisa phezulu
Eli qhosha lilinde wena shiya isikhombisi semouse ngasentla ukuze ubone oopopayi ababalaseleyo abayenzayo.
Elinye iqhosha lokuhambisa elimele ngaphandle oopopayi abafaka umbane oko kwenzeka xa undanda ngaphezulu kwesikhombisi.
Esinye isiphumo sokuhambisa umdla kwiCSS esime ngaphandle kwayo ukukhawuleza kunye nokukhawuleza ivelisa imvakalelo elungileyo.
Impembelelo yokuhambahamba okuhle
Iqhosha elinye lokuhambisa phezulu ngesitayile esihle oopopayi beendawo ezinendawo yakudala yokuthinta.
Un elula kunye nefuthe lokufuna ukwazi eyonyusa ubungakanani beqhosha le-CSS ngentwana ye-HTML.
Stripe yaziwa ngokuba yayo Umsebenzi omkhulu kuyilo lwe-UI lwewebhusayithi yakho, Eli qhosha leStripe liphefumlelwe ukuze ulise kwiwebhusayithi yakho.
Iziphumo ezintathu zeqhosha le-CSS
Iziphumo ezintathu zeCSS oopopayi beqhosha kwaye sinokuthi siqwalasele isitayile esihle.
Iqhosha yokuthandwa kweTwitter ngoopopayi abaqaqambileyo nabanamandla. Ifanelekile kwezi ntsuku zosasazo zasekuhlaleni.
Apha ziya kuba ziintliziyo abo batsibela ngovuyo xa iqhosha lokucofa licofiwe.
Okunye oopopayi abanomdla kakhulu onesiphumo esihle yeqhosha elinjengeenethiwekhi zonxibelelwano.
Dlala iqhosha eliza kuqala tsiba, nangenxa yovuyo, xa icinezelwe.
Ukudlala kwakhona iqhosha leCSS
Oopopayi bayakucima Umjikelo ojikeleze i icon Ukudlala kwakhona kweli qhosha leCSS.
Misa kancinci / udlale iqhosha
Iqhosha nje nqumama / dlala kancinci ukubamba Kuyilo.
Iqhosha elilula leRetro
Njengokuba besicinezela i amaqhosha kumlawuli womdlalo ukusuka kwikhonsoli efana neXboX.
Iqhosha eline oopopayi bomnyama ephinda iphinde ibuyisele kwizaziso eziza kwi-Galaxy S8.
Idrowa evula nge ii-icon zemidiya yoluntu kuko konke ngokushiya isikhombisi semouse kuso.
Iqhosha eline umgangatho oopopayi Oko kubangelwe ngumzuzu wokucofa kuwo.
Iimpawu ze-3D zentlalo
Un Ingqwalasela-yokubamba kwaye oko kwenzeka xa sishiya isikhombisi sibuzisiwe.
Ezi Amaqhosha ezentlalo asebenzisa oopopayi Utshintsha umbala ukusuka phezulu ukuze wazihlule kwabanye.
Amaqhosha aseCubic ekuhlaleni
La maqhosha akhona ebekwe kwityhubhu ehamba ngokugqibeleleyo xa sishiya isikhombisi kuyo.
Un iqhosha lokwabelana ezahlukileyo ngoopopayi abajikelezayo obungenasiphelo.
Amaqhosha okwabelana ngemidiya yoluntu kwi-SVG
Betha nje iqhosha lesabelo kwaye uya kufumana isiphumo esivela kuThixo oko kwenzeka kweli qhosha leendaba zentlalo.
Iqhosha lokwabelana ngeGooey
Ngomnye oopopayi «Gooey», Eli qhosha lixabisa kakhulu isiphumo esivelisayo.
Este Iqhosha lahlulahlulwe langamacala amane ahlukeneyo ke unokukhetha inethiwekhi oza kupapasha kuyo umxholo owabelana ngokuthe ngqo.
Iqhosha lokujonga inkwenkwezi
Iqhosha ukuhambisa phezulu okuqokelela amanqaku oza kuyinika xa ushiya isikhombisi.
Iqhosha lamaNqaku eSVG
Elinye iqhosha lokuhambisa phezulu amanqaku ngenqanaba imveliso okanye nantoni na.
Ngokucinezela Layisha iqhosha liza kuqala inkqubo yokukhuphela okanye nantoni na efanelekileyo kwiwebhusayithi yakho.
Cinezela kwaye ifom iya kwamkelwa okanye naliphi na elinye inyathelo efuna ukuvunywa ngumsebenzisi wewebhusayithi yethu.
Unikezelwe kwiselfowuni, Eli qhosha kufuneka licinezelwe ukuba lisiwe ecaleni kweso senzo siqhelekileyo kwii-smartphones.
Un isenzo esisecaleni ngomnwe okanye isikhombisi kwaye siya kuvula i-terminal ngokwayo. Elinye iqhosha elifanelekileyo kwiselfowuni.
Igalelo elikhulu mhlobo, enkosi
benito carlos sitsho
iphepha lakho linzima kancinci, ukuba uyazi okuninzi malunga nenkqubo kwaye ezi zinto kufuneka uzilungiselele kwaye ungasebenzisi i-wordpress xc
Phendula kwi-benito carlos
Eyona webhusayithi inokukhuphela iifoto zomthombo ovulekileyo